Labadii Xidig Ee Éric Abidal Doorashada Kowaad & Labaad Ka Dhigtay Intii Aan Shaqada Barcelona Laga Caydhin Oo La Shaaciyay. - Gool24.Net
Labadii Xidig Ee Éric Abidal Doorashada Kowaad & Labaad Ka Dhigtay Intii Aan Shaqada Barcelona Laga Caydhin Oo La Shaaciyay.
September 14, 2020 Mahamoud Batalaale
Agaasimihii ciyaaraha ee kooxda Barcelona ee Éric Abidal ayaa la ogaaday difaaca bidix ee doorashada kowaad u ahaa ee uu doonayay in uu xagaagan la soo saxiixdo iyo waliba midka labaad ee doorashada xigta u ahaa ka hor intii aan shaqada laga caydhin.
Kadib markii ay Barcelona bahdilaadii ugu xumayd kala kulantay Bayern Munich kulankii Champions League waxaa shaqada laga caydhiyay agaasimihii ciyaaraha ee Éric Abidal laakiin waxa uu qorshihiisu ahaa ayaa la ogaaday.
Wargayska caanka ah ee dalka France ka soo baxa ee L’Equipe ayaa shaaciyay labada difaac bidix ee uu Abidal doonayay in uu xagaagan ku soo xoojiyo kooxda Barca intii aan shaqada laga joojin.
L’Equipe ayaa lagu shaaciyay in halyayga reer France ee Abidal uu doonayay in marka hore uu Barcelona ka diro difaaca bidix ee Junior Firpo isla markaana uu bartilmaameedsanayay laba difaac bidix oo horyaalka ligue 1 ee dalka France ka ciyaara.
Waxaa xogtan lagu xaqiijiyay in Eric Abidal uu doorashada kowaad ka dhiganayay in uu xagaagan Barcelona keeno difaaca bidix ee kooxda Rennes ee Faitout Maouassa kaas oo hore amaah ugu soo qaatay kooxda Nimes.
Faitout Maouassa oo 22 sano jir ah ayaa xili ciyaareedkii la soo dhaafay saftay 32 kulan wuxuuna soo dhaliyay 3 gool isaga oo sameeyay 2 gool caawin wuxuuna Abidal doonayay in uu xidigan ka dhigto doorashada kowaad ee uu Camp Nou ku keenayay waxaana lagu qiimeeyaa 12 milyan yuro.
Waxa kale oo xogtan lagu sheegay in Abidal uu sii qorshaystay in haddii uu waayo saxiixa Faitout Maouassa in uu doorashada labaad ka dhigtay difaaca kooxda Angers ee Rayan Aït-Nouri oo 19 sano jir ah.
Laakiin intii aanu Abidal isku dayin in uu hir galiyo qorshihii uu suuqa ka lahaa waxaa gabi ahaanba laga caydhiyay shaqadii agaasimaha ciyaaraha Barcelona kadib ceebtii 8-2 ahayd ee ka soo gaadhay Bayern Munich.
Barcelona ayaa ilaa hadda ku jaho wareersan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxayna wali u muuqdaan kuwo muhiimada kowaad ka dhigtay in ay marka hore kooxdooda ka diraan ciyaartoyda aanu Ronald Koeman doonayn in ay sii joogaan.